သင်၏ဝိုင်ဖိုင်လုံခြုံရေးကိုမည်သို့စစ်ဆေး။ မည်သူနှင့်ချိတ်ဆက်သည်ကိုသိပုံ။ | Androidsis
ထံမှမှတ်ချက်များမှတစ်ဆင့်နေ့စဉ်ကျွန်ုပ်တို့ထံလာသည့်တောင်းဆိုမှုများကိုလက်ခံခြင်း အဆိုပါ Androidsis အသိုင်းအဝိုင်း မတူကွဲပြားတဲ့လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ၊ ပုဂ္ဂလိကစာတွေတောင်မှ၊ ဒီနေ့မင်းကိုဘယ်လိုသင်ကြားရမလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုယူလာပေးတယ်။ မည်သည့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းနှင့်၎င်းသည်လုံခြုံသောကိရိယာများဟုတ်မဟုတ်သိရန်သင့် Wifi လုံခြုံရေးကိုစစ်ဆေးပါ သို့မဟုတ်၎င်းတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖိုးတန်သောအချက်အလက်များကိုခိုးယူရန်အတွက်အားနည်းချက်များရှိနိုင်သည့်လုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ပွင့်လင်းသောတံခါးပေါက်အချို့ရှိသည်။
ဤအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တင်ထားသည့်ဗွီဒီယိုတွင်ဖော်ပြပါကဤပို့စ်တစ်ခုတည်း၌ကျွန်ုပ်ထားခဲ့သည့်အနေဖြင့် Google Play Store မှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုရိုးရှင်းစွာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် Android terminal မှ၎င်းကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဗားရှင်းအတွက်မထုတ်ဝေပါ။ အောက်မှာအသေးစိတ်ပြောပြပါ ဦး ကျွန်ုပ်တို့၏ Wifi နှင့်၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်စက်ပစ္စည်းများ၏လုံခြုံရေးကိုစစ်ဆေးပါ.
1 ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိုင်ဖိုင်လုံခြုံရေးကိုမည်သို့စစ်ဆေးရမည်၊ မည်သည့်ကိရိယာများနှင့်ချိတ်ဆက်နေသည်ကိုမည်သို့သိရမည်နည်း
2 Kaspersky Smart Home & loT Scanner ကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမည့်လျှောက်လွှာ၊ လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ၏လျှောက်လွှာ Kaspersky, အဘယ်သူမျှမကဆက်ပြောသည်ကြော်ငြာခြင်းမရှိဘဲအပြည့်အဝအလိုအလျောက်နှင့်အခမဲ့ application ဖြစ်ပါတယ် စစ်ဆေးရန် Wi-Fi ကွန်ယက်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သာဤကွန်ယက်သည်လုံခြုံမှုရှိမရှိ၊ ၎င်းသည် router (သို့) access point ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အားနည်းချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းစသည်တို့အပြင်အခြားအရာအားလုံးကိုလည်းပါဖော်ပြပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Wifi ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဆိပ်ကမ်းများအားလုံးကိုပြောပြလိမ့်မည်.
၎င်းသည်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းပါသည် Wifi access point ကိုစစ်ဆေးပါဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၏ home router သည်ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်များကိုအန္တရာယ်ရှိသည့်နည်းလမ်းဖြင့်အသုံးချနိုင်သည့်အားနည်းချက်သုံးခုကိုတွေ့ပြီဟုပြောပါ။
ဒီ app ကငါ့ကိုပေးတယ် ကျွန်ုပ်၏ဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဆိပ်ကမ်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်IP လိပ်စာ၊ MAC လိပ်စာ၊ စက်လည်ပတ်မှုစနစ် (သို့) စက်ပစ္စည်း၏အမှတ်တံဆိပ်စသည့်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းစစ်ဆေး။ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Wi-Fi ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိဘဲခိုးယူနေခြင်းရှိ၊
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Router ၏အပြင်အဆင်အပြင်ထပ်မံထည့်သွင်းရမည် ဤရှာဖွေတွေ့ရှိထားသောချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာများသို့ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်မှုဖြတ်တောက်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွင့်ပြုချက်နှင့်သဘောတူညီမှုမရှိပါကသင်၏စကားဝှက်ကိုပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသောအသစ်တစ်ခုသို့ပြောင်းခြင်းသည်အကြံပြုသင့်သည်။
လျှောက်လွှာအားဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းကိုနက်ရှိုင်းစွာပြုလုပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောသောအခါကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည် Application သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Wi-Fi ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအားလုံးကိုစစ်ဆေးသည်စမတ်မီးသီးများ၊ ချိတ်ဆက်ထားသောစက်ကိရိယာများ၊ ချိတ်ဆက်ထားသောတီဗီများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုကိုအသုံးပြုသောမည်သည့်စက်ကိရိယာကိုမဆိုတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
ဒီအပြင်အပြင်၊ ကိရိယာအသစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Wi-Fi ကွန်ယက်သို့ဆက်သွယ်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးမည့်အသိပေးစနစ်.
ငါဘယ်လိုပြောမလဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ Wifi ကွန်ယက်၏လုံခြုံရေးကိုစစ်ဆေးရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအကြံပြုထားသော application တစ်ခုထက်ပိုသည်၊ မည်သည့်ကိရိယာများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းသိရှိရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်မှုအခိုးခံရခြင်းရှိမရှိကိုသိရှိရန်နှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့၏ချိတ်ဆက်ထားသောစက်ပစ္စည်းများသည်လုံခြုံမှုရှိမရှိသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးအားနည်းချက်တစ်ခုခုရှိမရှိသိရန်ဖြစ်သည်။
AH! ဒါတွေအားလုံး rooted terminal တစ်ခုမလိုပါဘူး သို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသော application များသို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်များကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
Kaspersky Smart Home & loT Scanner ကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်။
Kaspersky စမတ်အိမ်နှင့် IoT စကင်နာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » သင်၏ Wifi လုံခြုံရေးကိုစစ်ဆေးပြီးမည်သည့်ကိရိယာများနှင့်ချိတ်ဆက်သည်ကိုမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း